iyintoni indlela yeqela xa kuvavanywa i-agile?
Eyona Agile Yeyiphi indlela yokuSebenza kweQela liphela kuvavanyo lwe-Agile?
Yeyiphi indlela yokuSebenza kweQela liphela kuvavanyo lwe-Agile?
Kwi-Agile, indlela yeqela liphela ithetha ukubandakanya wonke umntu onolwazi olwahlukileyo kunye nezakhono zokuqinisekisa impumelelo yeprojekthi. Iqela libandakanya abameli abavela kumthengi okwaziwa ngokuba nguMnini weMveliso, kunye nabanye abathathi-nxaxheba abachonga iimpawu zemveliso.
Iqela kufuneka libe lincinci, ikakhulu phakathi kwesihlanu ukuya kwesisixhenxe, nangona kunjalo, amaqela aphumeleleyo aye aqatshelwa nabantu abambalwa njengabantu abathathu kwaye uninzi lwasithoba.
Ngokufanelekileyo, iqela liphela labelana ngendawo yokusebenza enye kwaye lihleli njengeqela, njengoko indawo yokubambisana iququzelela ngamandla unxibelelwano kunye nokunxibelelana.
Inkqubo yeqela liphela iyaxhaswa ngeentlanganiso zokuma mihla le ezibandakanya onke amalungu eqela, apho inkqubela phambili yomsebenzi isaziswa khona kwaye naziphi na izithintelo kwinkqubela phambili zibonakalisiwe. Inkqubo yeqela liphela ikhuthaza amandla okusebenza kunye nokusebenza kweqela.
Kananjalo, ukusebenzisa indlela yeqela liphela, oko kuthetha ukuba abavavanyi banokunceda abaphuhlisi ukuba babhale iimvavanyo ezizenzekelayo kwaye ngokuchaseneyo nabanini bemveliso banokunceda Ukuphonononga Uvavanyo loKwamkela uMsebenzisi.
Ukusetyenziswa kwendlela yeqela elipheleleyo kuphuhliso lwemveliso sesinye sezibonelelo eziphambili zophuhliso lwe-Agile. Izibonelelo zayo zibandakanya:
Ukuphucula unxibelelwano nentsebenziswano kwiqela
Ukwenza iiseti zobuchule ezahlukeneyo ngaphakathi kwiqela ukuba zixhaswe ukuze kuzuze iprojekthi
Ukwenza umgangatho uxanduva lomntu wonke
Kwiiprojekthi ze-Agile, abavavanyi okanye ii-QAs ayisiyiyo yodwa ejongene nomgangatho wemveliso kodwa iqela liphela linoxanduva lomgangatho.
Undoqo wendlela yeqela elipheleleyo ilele kubavavanyi, abaphuhlisi, kunye nabameli beshishini abasebenza kunye kuwo onke amanqanaba enkqubo yophuhliso.
Abavavanyi baya kusebenza ngokusondeleyo kunye nabaphuhlisi kunye nabameli beshishini ukuqinisekisa ukuba amanqanaba omgangatho ofunekayo ayafezekiswa. Oku kubandakanya ukuxhasa kunye nokusebenzisana nabameli beshishini ukubanceda benze iimvavanyo ezifanelekileyo zokwamkela, bachaze inkcazo eyenziwe, basebenzisane nabaphuhlisi ukuze bavumelane isicwangciso sokuvavanya , kunye nokuthatha isigqibo malunga neendlela zovavanyo oluzenzekelayo. Abavavanyi banokuhambisa kwaye bandise ulwazi lovavanyo kwamanye amalungu eqela kunye nefuthe kuphuhliso lwemveliso.
Iqela liphela liyabandakanyeka nakuluphi na uthethathethwano okanye iintlanganiso apho kuboniswa khona iimveliso, zihlaziywa okanye ziqikelelwa. Umbono wokubandakanya abavavanyi, abaphuhlisi, kunye nabameli beshishini kuzo zonke iingxoxo zezinto ziyaziwa njengamandla amathathu, okanye ii-Amigos ezintathu.
pixel kaGoogle 5 ukukhutshwa komhla
Qaphela i-10 vs pixel 4 xl
Ilizwi likaGoogle lifumana ukhetho lokurekhoda imibuliso ye-voicemail kwi-Android nakwi-iOS
Ezona meko zinamandla kumda we-Samsung Galaxy S7
I-iPad Pro 2018 vs iPad Pro 2017: jonga indlela iPads entsha ethelekisa ngayo kunyaka ophelileyo kunye neemodeli ngokobungakanani
Iintengiso zeSamsung ye-Samsung Galaxy S21
Uphengululo lweZTE Axon 7 Mini
I-Verizon vs AT & T, T-Mobile kunye ne-Sprint yedatha engenamda yokuthelekisa amaxabiso
Isicwangciso sokufakelwa okulandelayo okulandelayo kwe-AT & T & apos; kukukhutshwa kwabathengi kunye nokuphindaphinda ngokufanayo
IVenmo ithatha iApple nekhadi layo elitsha lekhredithi